डा. शेरबहादुर पुनको ब्रिफिङ :... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
डा. शेरबहादुर पुनको ब्रिफिङ : र्‍यापिड टेस्ट के हो, किन पर्खनुपर्छ पिसिआर परीक्षण?
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमित पत्ता लगाउन परीक्षणको दर बढाइरहेको छ।
सरकारले देशभर क्वारेन्टिनमा बसेका र चैत यता विदेशबाट आएकाहरुको र्‍यापिड टेस्ट गरिएको छ।
त्यस्तै शंकास्पदहरुको सँगसँगै पिसिआर परीक्षण समेत गरिरहेको छ।
सरकारले अहिलेसम्म ८ हजार पिसिआर परिक्षण गरेको छ भने १९ हजार र्‍यापिड टेस्ट किटबाट परीक्षण गरिसकेको छ।
कतिपय र्‍यापिड टेस्टमा आएका नतिजाहरु पिसिआर परीक्षणमा उल्टिरहेका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार र्‍यापिड टेस्टले मानिसको शरिरमा रहेको एन्टिबडी पत्ता लगाउँछ। यस्तो एन्टिबडी मानिसको शरिरले कोरोना प्रवेश गरेको अवस्थामा निर्माण गर्छ।
डाक्टर पुन मानिसको शरिरमा कोरोना विरुद्ध खडा हुने आर्मीका रुपमा एन्टिबडीलाई लिनुपर्ने बताउँछन्। एन्टिबडीको परीक्षण मानिसको रगतबाट गरिन्छ। एन्टिबडी परीक्षण संक्रमित पत्ता लगाउन गरिएपनि सँगसँगै पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
पिसिआर टेस्टले भने मानिसको शरिरमा कोरोना भाइरस रहे नरहेको पत्ता लागउँछ। पिसिआर टेस्ट मानिसको र्‍याल र खकारबाट गर्न सकिन्छ। पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ। 'रुघा खोकीको लक्षणसँग मिल्ने लक्षण भएका व्यक्ति र विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुको पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्छ', पुन भन्छन्, 'दायरा बढाउनुपर्छ।'
सेतोपाटीले यहि विषयमा डाक्टर पुनलाई साेधेको छ। हेर्नुहोस् भिडिओ-
प्रकाशित मिति: आईतबार, वैशाख ७, २०७७, १२:३१:००